Zviwanikwa | KUSVIRA
Pano unogona kuwana: -
-> Zvinongedzo kumabhuku izvo zvinokurukura zvazvazvino zvevakadzi pfungwa. Vana mabhuku.
-> Huwandu hwevanachiremba vakanyora zvinyorwa kutenderera kweiyo transgender kufamba.
-> Prof John Whitehall vanyora zvakatevedzana zvinyorwa paGender Dysphoria. Vazhinji vane marezenzi nesainzi nehurumende zvakabatanidzwa.
-> Pane chinongedzo kune Walt Heyer's Webhusaiti. Walt akachinjika ndokugara semukadzi kwemakore gumi zvisati zvavengwa uye zvino anotsigira vamwe vatambi vanoda kusiya mararamiro ehupenyu
-> Vanhu vazhinji vakasiya mararamiro avo e LGBT nerubatsiro rwevamwe. Idzi ndidzo nyaya dzevanhu gumi nevaviri dzinopesana nehuwandu hwekuti shanduko kurapa inogara ichikuvadza vanhu.
-> Kudzivirira Kukuvadza, kusimudzira Ruramisiro iri pepa neLa Trobe University, Australia, iyo inoti shanduko yekurapa inogara ichikuvadza vanhu. Dr. Con Kafataris vanyora tsoropodzo yake yepepa reLa Trobe.
. Izvo zvinyorwa zvemavhidhiyo, ayo anogona kushandurwa online pamimwe mitauro, anogona kuwanikwa pano.
Prof John Whitehall Vanonyora muQuadrant Magazine
Zvinyorwa zvakawanda pane Gender Dysphoria, Hormone blockers uye zvinhu zvese Transgender
WeVictorian Labour kurambidza dzimwe nzira dzekuyedza kuyedzwa kwevakadzi kuvana. - Prof John Whitehall
Hurumende yeVashandi veVictoria iri mubishi kunyora mutemo kurambidza vanonzi 'kutendeuka mushonga' uyo unotsanangura se 'chiitiko chero chipi zvacho kana kurapwa kunoda kushandura, kudzvinyirira kana kubvisa hunhu hwemunhukadzi' kana hunhu.
VERENGA ZVAKAWANDA ....
IS Gender DYSPHORIA RINONYANYA KUKANGANANA - Prof Dianna Kenny
Kunyangwe ichiyedza kupomera mhaka yekukanganiswa kwenzanga pazera redhijitari, mune vanhu, vadiki nevakuru, vanongoramba vakasungirirwa pamatanho avo ezvemitambo yenhau, vachiongorora nemufaro maficha avo enhau dzichangoburwa, fashoni, nzvimbo yezororo, rave bato. kana kufambidzana webhusaiti kutora "fomo" yavo (kureva, kutya kupererwa), kusarudzika kwehukama kwafanotungamira kutenderera kwe cyberage, nekudaro vachiisa mavambo avo mushe mundangariro dzevanhu, vachigovanisa vezvenhau pabasa ravo sechinhu chakanakira kukanganisa .
Misoro mikuru mukuita sarudzo yekurapa shanduko yecancer: Mibvunzo & Mhinduro. - Prof Dianna Kenny
Munyaya ino, ini ndinogadzirisa nyaya dzakakosha munhaurirano ye transgender sezvo ine vana uye vechidiki. Izvi zvinosanganisira: "Kurapa kuchinjika kurapa" kwakachengeteka here, "kupora" uye mukunakirwa nemwana? Mukufunga iyi mibvunzo, ini ndinoongorora yakaipa inozivikanwa mhedzisiro yekudzvinyirira uye kudzvanyirira-pabonde mahormone, kusanganisira kusabereka uye mamwe mamiriro ezvekurapa uye kuwedzera kwakatsveneswa kwekuzviuraya pasina kurapwa.
Kutora kwechikadzi mitambo uye kusangana kwevakadzi: Iyo yekurovera kosi yetsika dzekurapa. - Prof Dianna Kenny
Muna2009, mumhanyi wemuSouth Africa Caster Semenya akahwina, padanho remamita makumi maviri kubva pamukwikwidzi wake wepedyo, mutambo wevakadzi mazana masere pamakwikwi etsiva. Kukunda kwake kwakaitwa kwenguva pfupi. Kupokana kwakamuka kuti Semenya aive "murume chaiye" .Makore gumi nemasere wekubva mumusha urombo paRwizi rweLondon kuSouth Africa akave chisarudzo chekunyunyuta kwevezvenhau kunze kwenyika kwakabatanidza kuburitswa kwemashoko ake epachivande pasina mvumo yake.
Gender Dysphoria Resource yeVanopa: Dr. William Malone
Semedical, izwi rekuti transgender / transsexual rinoreva munhu anenge atora matanho akakosha ekuzviratidza pachavo munharaunda sevakomana kana vakadzi, mukuyedza kurerutsa dysphoria yakasimba uye inopfuurira. Hapana anozvarwa ari transgender kana transsexual uye hapana masayendisiti akakomba akamboita chakadai. Izvo hazvigonekwe kuberekwa mune "isina kunaka" muviri ("mukomana uropi" mumuviri wevasikana semuenzaniso).
Vana vakadzingwa nevarume: kurapwa inpatient kunobatsira here? - Dr. Robert Kosky.
Abstract Kurapa kweinongedzo-mitsara yevana vanovhiringidzwa zvechikadzi parizvino haina kujeka. Chirevo chekiriniki iyi chinotsanangura vana vasere vane hunhu hwepamuchinjika vakabatwa mune inatiati yevana. Mhedzisiro yenguva pfupi uye kwenguva refu yekuongororwa kwekliniki inopiwa, iyo inoratidza mhedzisiro yakanaka. kumanikidzwa, asi hupenyu hwevana zvinoenderana neuchenjeri hwavo.
DzeBonde neBonde - Dr. Paul McHugh
Chinyorwa cheMhariri: Mibvunzo ine hukama nehukadzi hwepabonde uye hukadzi fani pane zvimwe zvakadzama uye zvega zvehupenyu hwemunhu. Mumakore achangopfuura vakashungurudzawo zvematongerwo enyika dzeAmerica. Isu tinopa chirevo ichi - chakanyorwa naDkt Lawrence S. Mayer, chiremba chechirwere chakadzidziswa pakurapa kwepfungwa, uye Dr. Paul R. McHugh, vanopokana zvinonyanya kukosha hwechiremba vepfungwa vekuAmerica vehafu yekupedzisira.
Mhuri Chekutanga - New Zealand. Nyevero yedzidzo kuna New Zealand - Prof John Whitehall
Denda re 'utachiona hwechikadzi dysphoria' riri kutsvaira nyika yekuMadokero. Sezvo zvakaputika kubva mukuwanikwa isingasviki makore gumi apfuura, iko zvino kuwanda kwekuwedzera kwehuwandu hwevana vari kuunzwa kumayunivhesiti akagadzirwa zvakanyanya muzvipatara zvevana zvikuru nekunyunyuta 'ivo vakaberekerwa mumuviri zvisizvo' ..
Chikumbiro cheParamende Kubvunzurudza muHurumende uye Kurapa Shanduko yeVana Gender Dysphoria - Prof John Whitehall
Ini ndinonyora kukutenda kunetseka kwako pamusoro pehuwandu hwekukurumidza hwevana veAustralia vanonzi vari kurwara nehuremu hwechisimba uye kutaura kunetseka kwangu kushomeka kweiyo sainzi yeiyo nzira yekurapa yekurapa kwe dysphoria yevechidiki.